Daawo: Mahdi Guuleed oo raali-gelin siiyey Rooble iyo Beesha Habar-gidir | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Daawo: Mahdi Guuleed oo raali-gelin siiyey Rooble iyo Beesha Habar-gidir
Muqdisho (Dalkaan.com) – Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa garab istaag xoog leh u muujiyey Ra’iisul Wasaare Rooble, kadib eedeyntii maanta ka soo yeertay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Somaliland.
Guddoomiye Cabdi Xaashi, Senator Cabdi Ismaaciil Samatar, Boqor Cusmaan Buurmadow iyo Xildhibaan Maareeye oo maanta shir jaraa’id ku qabtay hoyga Cabdi Xaashi uu Muqdisho ka degan yahay ayaa sheegay in Ra’iisul Wasaare Rooble iyo xubno beeshiisa ah ay boobayaan kuraasta baarlamaanka ee reer waqooyiga.
Hase yeeshee Mahdi Guuleed oo caawa hadlay ayaa sheegay in wixii maanta ka dhacay guriga Cabdi Xaashi aysan dhaqan Soomaaliyeed aheyn.
Waxa uu sheegay in hadalkii maanta uu gef-weyn ku ahaa Ra’iisul wasaaraha iyo xubnihii kale ee loo jeediyey, isagoo sheegay in beelaha Dir-waqooyi ay u mahad-banaan yihiin doorashada kuraastooda.
“Wixii maanta ka dhacay guriga Cabdi Xaashi dhaqan Soomaaliyeed ma aheyn Ra’iisul Wasaare Rooble iyo beeshiisa Habargidir waxaan ka raali gelinayaa gefkaas, waxaan leeyahay xaal qaata, Ra’iisul wasaarow raali ahaaw, beesha Habargidir-na hanaga raali noqoto,” ayuu yiri Mahdi Guuleed.
Sidoo kale Mahdi ayaa sheegay inay dhigi doonaan gogol ay ku xaal-mari doonaan beesha Ra’iisul Wasaaraha, “Dhaqanka aad ayaan u naqaan, wixii maantana dhaqan fiican ma aheyn,” ayuu yiri.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka oo faahfaahin ka bixiyey doorka uu ra’iisul wasaare Rooble ku leeyahay doorashada kuraasta reer waqooyiga ayaa sheegay in door dhaqaale oo aan looga maarmin uu ku leeyahay xafiiska Rooble, balse uusan ku faro-gelin hanaanka loo maamulayo doorashada kuraastaas.
Nala Arag Raga Fowdada Ku Wada Kulamada Baarlamaanka Iyo Jaahil Nimadooda...
Wararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay JOWHAR + khasaaraha
Cristiano Ronaldo oo lagu soo Daray liiska ciyaartoyda xulka Qaranka Portugal...
Liverpool oo diyaar u ah inay bixiso lacagta lagu burburin karo...
Marcelo oo Qandaraas cusub u Saxiixaaya Real Madrid?
Kylian Mbappe oo laga cabsi qabo inuu ciyaaridoono kulanka Real...
Muxuu yahay dalabka ay Ilhaan Cumar hordhigtay Joe Biden ee la...